Let's talk about IT: Auto Increment ID
တစ်ခါတစ်လေ ဒီလိုမျိုးလေးမလား ကြုံဖူးမလားမသိဘူး။
Database Table နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါတော့။
Hibernate မသုံးတဲ့ ရိုးရိုး ကိစ္စလေးတွေမှာပြောတာပါ။
ပထမ table ကို TableA လို့ထားပါတော့။
ဒုတိယ table က TableB. TableA မှာ Id က auto increment လုပ်ထားတယ်။
ရိုးသားကြိုးစားတဲ့ DB Admin က normalize သေချာလုပ်ထားတဲ့အတွက် TableA ရဲ့ primary key က TableB မှာ Foreign key အဖြစ်နဲ့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာက Table A မှာ record တစ်ခုထည့်လိုက်ပြီးတိုင်း TableB မှာ အဲဒီ ID ကို Foreign key အနေနဲ့သုံးထားတဲ့ နောက်ထပ် Record တစ်ခုကို ထည့်ရပါမယ်။
ID Name NRIC
1 Zero 140222
ID ---- TableA_ID ----- Address
1 -------- 1 ---------------- Eunos Rainbow
အဲဒီလို record တစ်ကြောင်းစီ ထည့်ချင်တာပါ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Table A ကို row တစ်ခု insert လုပ်တာက ငှက်ပျောသီး အခွံနွှာတာထက်လွယ်ပါတယ်။ နောက်တော့ ID ကို ပြန်ရှာရတာက ပျင်းစရာကောင်းပါတယ်။ Select ပြန်လုပ်ရင်ရပေမယ့် ပျင်းပါတယ်။ အဲဒီလို မလိုအပ်တဲ့ code တွေရေးမယ့်အတူတူတော့ ဘာလို့ Developer လုပ်မှာလဲ ... ဆော့ခရေတ္တိခေတ်က စာကူးတဲ့သူသွားလုပ်နေမှာပေါ့။ အဲဒီလို ငပျင်းတွေအတွက် တစ်ခုလုပ်လို့ရတာရှိပါတယ်။ auto increment လုပ်ထားတဲ့ ID ကို ပြန်ယူလိုက်လို့ရပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်။ မဟုတ်ရင် နောက်တစ်ခါ သွား select လုပ်ရတဲ့အတွက် connection လည်းခြေထောက်ညောင်းမှာပဲ။ လူအယောက် တစ်သန်းသုံးတဲ့ System မှာဆို အချိန်အများကြီးကုန်သွားမယ်။ လေးငါးဆယ်ယောက်လောက်သုံးဖို့အတွက်တော့ System မလိုပါဘူး။ လက်နဲ့ပဲ ကောက်ရေးထားလိုက်ရင် ရတာပါပဲ။ ပုံမှန် အားဖြင့် Developer တစ်ယောက်ဟာ database ကို တတ်နိုင်သလောက် အသွားအလာလျှော့ရပါမယ်။ တစ်ခါသွားပြီး အကုန်ယူလို့ရတာ ယူနိုင်ရပါမယ်။ မယူနိုင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ့် SQL ကို မြှင့်တင်ဖို့လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် သွားတယ်ပြန်တယ်...ပြန်သွားတယ် ထပ်သွားဦးမယ်ဆိုရင် System ကလေးတယ် ပိုလေးတယ် ...အလုပ်မလုပ်တော့လောက်အောင်နှေးတယ်၊ DB sever ရဲ့ CPU က ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း ကနေကို ပြန်ကျမလာတော့ဘူး။ အဲဒါမျိုးတွေဖြစ်မယ်။ အဲဒီလိုပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက် ဒုကပေးတတ်တဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ developer တွေရဲ့ code ကို boiler-plate code တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ maintain လုပ်ရတဲ့သူကတော့ မေတ္တာ အကြိမ်ကြိမ်ပို့မှာ အသေအချာပါပဲ။
အင်း ... အဲဒီ auto increment id လေးပြန်ယူတာလေးရေးကြည့်ပါမယ်။
PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(sQuery,Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);
ResultSet rs = pst.getGeneratedKeys();
autoId = rs.getInt(1);
အဲဒီလိုလေးရေးလိုက်ရင် autoId ကို နောက်တစ်ခါ ထပ်သွားမယူဘဲ သိရပါတယ်။ အသွားအလာ သက်သာသွာပါတယ်။ ခြေထောက်မညောင်းတော့ပါဘူး။ အဲဒီ autoId လေးကို ကောက်ပြီး ဒုတိယ TableB မှာ insert လုပ်လိုက်ပါ။ များများစဉ်းစားပြီးနည်းနည်းပဲ အလုပ်လုပ်ပါ။ လွယ်တဲ့နည်းတွေ ထွင်ထားပြိးသားရှိပါတယ်။ များများလေ့လာပြီး သက်သာအောင်နေပါ။
try and error နည်းက လူပင်ပန်းသလောက် အကျိုးမရှိဘူး။ တွက်ခြေမကိုက်ဘူး။
work hard ဆိုတဲ့စကားလုံးကို Developer တွေမှာမသုံးပါဘူး။ Work smart လို့ပဲ သုံးပါတယ်။ ပျင်းတဲ့သူဟာ Smart ကြတဲ့နည်းတွေအများကြီးသိပါတယ်။ work hard ကြီးတွေကို လူကြီးတွေက ချီးကျူးပါတယ်။ Work Smart တွေကိုတော့ လေးစားကြပါတယ်။ သက်သက်သာသာလေး လေးစားခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။
Posted by Zero Divided by Zero is Zero (Brahmagupta Rule) at 11:59 PM
Labels: auto increment id, Java and DB
NTFS Filesystem support on Linux
Server Clustering ဆိုတာ . . . (2)